चलचित्रमा पनि ईन्जिनियरिङ ज्ञान प्रयोग गर्छु – ई. रोशन गुरुङ - Milan World News
Homeअन्तरवार्ता | INTERVIEWचलचित्रमा पनि ईन्जिनियरिङ ज्ञान प्रयोग गर्छु - ई. रोशन गुरुङ
सिमि नासा(पितृलोक) चलचित्रको पोखरा, युके, हङकङमा सफल प्रदर्शन भइसकेको छ । कोरानाको कारण प्रदर्शन स्थगित भएको यो चलचित्र यही असार १८ गते देखि २२ गतेसम्म पाँच दिन लगातर बाराही हल, तेर्सापट्टीमा प्रदर्शन हुदैछ । प्रत्येक दिन दिउँसो १२ बजे प्रदर्शन हुने सिमि नासा युनिटले जनाएको छ । पस्तुत छ उक्त चलचित्रका लेखक तथा सह–निर्देशक ईन्जिनियर रोशन गुरुङसंग गरिएको कुराकानी :
१. “सिमि नासा” चलचित्र किन हेर्ने ?
सिमि नासा चलचित्र मैंले ३ वर्ष रिचर्स गरेर लेखेको हुँ । यो चलचित्रमा विशेषगरि दाज्युभाईको महत्व, बायो पुजा गर्दा के हुन्छ ? नगर्दा के हुन्छ ? अर्घुम गर्दा के हुन्छ ? नगर्दा के हुन्छ ? थाहा पाउन सकिन्छ । हिन्दुको गोत्रले तमु समुदायमा पार्न सक्ने नकरात्मक असरबारे पनि चलचित्रले संकेत गर्न खोजेको छ ।
२ . तपाई ईन्जिनियरिङ पृष्ठभुमिको मान्छे चलचित्र बनाउन गाह्रो हुदैन ?
ईन्जिनियरिङ भनेको विज्ञानको प्रयोग हो । चलचित्रमा कला भएर मात्र पुग्दैन । कलालाई विश्वासनिय बनाउन आवश्यक छ । विश्वसानिय बनाउने भनेको विज्ञानले नै हो । चलचित्र राम्रो बनाउन धेरै प्रकारका ज्ञान आवश्यक हुन्छ । ईन्जिनियरिङले मलाई धेरै मदत पुगेको छ । म चलचित्रमा पनि ईन्जिनियरिङ ज्ञान प्रयोग गर्छु ।
३ . “सिमि नासा”मा पनि प्रयोग गर्नुभएको छ ?
मैंले अघि नै भनें । चलचित्रमा धेरै प्रकारका ज्ञान आवश्यक हुन्छ । तमु प्येताँ ल्हुँताँको ज्ञान, मानवशास्त्र, विज्ञान, ईन्जिनियरिङ, साहित्य, मनोविज्ञान, कला इत्यादि सबै सिमि नासामा मिश्रित छ ।
४. कुनै उदाहरण दिन मिल्छ ?
जस्तै यो चलचित्रमा कुनै पात्र सिमि नासा जानु पर्ने हुन्छ । अब उक्त पात्रलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ? प्रस्तुतीकरण यस्तो हुनु आवश्यक छ ताकी पात्र अघि बढ्दा साँचै सिमि नासा तिर गइरहेको भान दर्शकहरुलाई होस् ।
होइन भने दर्शकले मन पराउैन । विश्वास गर्दैन । हो यस्तै पस्तुतिमा कुनै एक विधाको ज्ञानले पुग्दैन ।
५ . तपाईले कुन कुन विधाको ज्ञान प्रयोग गर्नुभएको छ त ?
पहिलो कुरा, सिमि नासा कता पर्छ ? थाहा पाउनु आवश्यक छ । प्येताँ ल्हुताँको ज्ञानले यो थाहा पाउन सकिन्छ । प्येताँ ल्हुताँको कुरा सत्य हो या होइन ? थाहा पाउन आवश्क हुन्छ । यो विज्ञानले गर्छ । अब विज्ञान भएर मात्र पुग्दैन । त्यसको सत्यतालाई नभत्काई प्रयोग गर्नु पर्दछ । यो ईन्जिनिरिङले गर्छ ।
६. माफ गर्नुहोला मैंले तपाईलाई बीचमै रोकें । यसको व्यवहारिक प्रयोग कसरी गर्नुभएको छ ? रहस्य बताउन मिल्छ भने बताइदिनुस् न ?
(हाँस्दै..) मिल्छ नि । त्यही भन्दै छु म । प्येताँ ल्हुताँले भन्छ कि मरेपछि आत्मालाई हिजो पुर्खाहरु जुन ठाउँबाट बसाई सर्दै आए, त्यही बाटो लान्छ । यो कुरालाई विज्ञानले उत्तर दिशा तर्फ हो भनेर भन्छ । यसबाट थाहा हुन्छ, उक्त पात्रलाई उत्तर तर्फ हिडाउनु आवश्यक छ । नत्र दर्शकले विश्वास गर्दैन । चार दिशा(पुर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण)लाई कपीमा कोर्दा उत्तर त सिधै ठाडो हुन्छ । चलचित्रको पर्दामा त सीधै ठाडो त देखाउन मिल्दैन । अब के गर्ने ? कसरी प्रस्तुत गर्ने ? यहाँ ईन्जिनियरिङ ज्ञान आवश्यक भयो ।
बुझनुपर्ने कुरा, यसको लागि पात्रलाई बायाँ तलदेखि दायाँ माथि हिडाउनु पर्ने हुन्छ । सिनेमेटोग्राफीमा यसरी प्रस्तुत गर्दा अन्ततः दर्शकले उक्त पात्रलाई सिमि नासा गइरहेको महसुस गर्छ । यो भन्दा फरक तरिकाले देखाउदा बिग्रिन्छ । अभिनय राम्रो भए पनि दर्शकले महसुस गर्दैन । यदि म संग ईन्जिनियरिङ ज्ञान हुन्थेन भने यस्तो प्रस्तुति गर्न सक्ने थिइनँ । सिमि नासा चलिचत्रले दर्शकको मन छुने सक्ने थिएन ।
७. कस्तो गहिरो कुरा बताउनुभयो । अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ ?
एकचोटी सिमि नासा हेर्नुहोला । सम्पुर्ण दर्शकहरुमा विनम्र अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
Previous articleजीटीन अध्यक्षमा पिताम्बर गुरुङ
Next articleसहारा क्लबको स्पोटर्स अवार्डलाई सघाउ